Iindaba -Izinto ezintlanu eziphambili ezichaphazela ixesha lokusebenza kweNdlela yeSlip
Iringi yesiliphu lilungu elijikelezayo elalisetyenziselwa ukunikezela ngoqhakamshelwano lombane ukusuka kwindawo emileyo ukuya kwiqonga elijikelezayo, linokuphucula ukusebenza ngoomatshini, ukwenza lula ukusebenza kwenkqubo kunye nokuphelisa iingcingo ezonakalisayo ezijingayo kumalungu ahambisekayo. Amakhonkco okutyibilika asetyenziswa kakhulu kwiinkqubo zekhamera eriyeli yeselfowuni, iingalo zerobhothi, ii-semi-conductor, iitafile ezijikelezayo, ii-ROVs, izikena ze-CT zonyango, iinkqubo ze-eriyali zomkhosi njl.njl.
Isakhiwo esipheleleyo sendandatho yesiliphu
Ngenxa yenkqubo yokwenyani yomthengi, ukunyuka kunye neemfuno zohlahlo-lwabiwo mali, sinako ukubanika izangqa zesiliphu esincinci, ngokusebenzisa imisesane yokutyibilika kwemingxunya, amakhonkco eediski ezityibilikayo, amakhonkco ahlukeneyo, njl njl. iingenelo zesakhiwo.
2.Izinto zeringi eslip
Ukudluliselwa kombane kwisilayidi kungenxa yokukhuhlana kweringi ejikelezayo kunye neebrashi ezimileyo, ke izinto zokwenza umsesane kunye neebrashi ziya kuchaphazela ngokuthe ngqo ubomi bokusebenza kwendandatho yesiliphu. Iibrashi ezininzi ze-alloy zihlala zisetyenziswa kwimveliso ngenxa yesakhono sokunxiba ukuxhathisa. Izinto zokugquma ezikumgangatho ophezulu zibaluleke kakhulu.
Ukucwangciswa kwendandatho yesiliphu kunye nokudityaniswa
Ukusebenza ngokutyibilika kwendandatho yesiliphu sisiphumo salo lonke ulungelelwaniso lwento, ke umenzi wesiliphu kufuneka aqinisekise ukuba icandelo ngalinye liya kulungiswa ngokufanelekileyo kwaye lidityaniswe. Umzekelo, amakhonkco egolide afakwe kumgangatho ophezulu kunye neebrashi ziya kuba nokuthelekisana okuncinci ekujikelezeni kunye nokwandisa ixesha lokuphila, ukuhlangana okunesakhono kuya kuphucula ukugxila kwesiliphu, amandla ombane, ukumelana nokugquma, ingxolo yombane kunye nexesha lokuphila.
Isantya sokusebenza kwendandatho yesiliphu
Iringi yesilayidi ngokwayo ayijikelezi kwaye ine-torque encinci kakhulu, iqhutywa ukuba ijikeleze sisixhobo somatshini esifana nemoto okanye ishafti. Isantya sayo sokusebenza kufuneka sincinci kunesantya sayo esenzelweyo, kungenjalo ixesha lokuphila liza kufutshane. Ngokuqhelekileyo ukusebenza ngokukhawuleza, ukunxiba iibrashi kunye neeringi ngokukhawuleza kwaye kuya kuchaphazela ukusebenza kwayo.
5.Umgangatho wokusebenza kwendandatho yesiliphu
Xa umthengi ethenga isilingi, umthengisi wesiliphu kufuneka abuze indawo yokusebenza kwesiliphu nayo. Ukuba iringi yesilayidi iyakusetyenziswa ngaphandle, ngaphantsi kwamanzi, elwandle okanye ezinye iindawo ezizodwa, kufuneka siphucule ukukhuselwa kwesilingi size ngokufanelekileyo okanye sitshintshe izinto ukuze ziyivumele ilungele okusingqongileyo. Ngokwesiqhelo i-AOOD isiliphu semisesane sinokusebenza kangangeminyaka emi-5 ~ 10 ngokugcinwa simahla phantsi kwendawo yokusebenza eqhelekileyo, kodwa ukuba iphantsi kobushushu obuphezulu, uxinzelelo oluphezulu okanye umhlwa kwiindawo ezizodwa, ixesha lokuphila liza kufutshane.
Ixesha lokuposa: Mar-18-2021